I-Casita Mistica a Southwest Adobe Field Home - I-Airbnb
I-Casita Mistica a Southwest Adobe Field Home
Khipha idolobha ukuze ugxile emvelweni futhi ujabulele i-Casita Mística e-El Mistico Ranch ehlezi entabeni ephakeme engu-7,300' namahektha angu-30 ogwadule oluphakeme lwemvelo olunamanzi entwasahlobo emvelo, eduze ne-Lincoln National Forest njengomakhelwane wethu olandelayo, empeleni ungumakhelwane wethu. uhambo olufushane nje oluya e-Capitan ngezinsizakalo eziyisisekelo nokuthenga; I-Ruidoso yobuciko, igalofu, indawo yokudlela, ukushushuluza, nokuningi. Isimo sezulu sipholile lapha futhi indawo itshalwe nge-pinon pine, juniper, nezinhlobonhlobo ze-cacti.
“Lena indawo ekahle ongayivakashela uma ufuna ukuzenza u-Georgia O'Keefe, noma uma ufuna okuhlangenwe nakho kweqiniso kwe-New Mexico kwekhaya le-adobe elisemaphandleni. UNogal muhle, futhi sasebenzisa leli khaya njengesisekelo sokuvakashela i-Apache del Bosque National Wildlife Preserve, White Sands, kanye ne-Valley of Fires. Kukhona nesayithi le-petroglyph elingekho kude kakhulu. I-Rustic igama, ngakho-ke qonda lokho, kodwa futhi uyakwazisa okwedlule leli khaya elikuphethe, kanye nolwazi lokuhlala ekhaya eliyiqiniso, elinomlando we-adobe elingakunikeza. Futhi qonda ukuthi, i-rustic njengoba injalo, ivuselelwe ngezindlela eziningi ezithandekayo. Bekuyisipiliyoni esiyingqayizivele.”
Kuhle futhi kukude kakhulu nedolobha eliseduze ne-Lincoln National Forest. Lapho ungathola khona iMvelo nezivakashi zethu ezivamile zenyamazane nama-elk. Futhi vakashela amanzi ethu emithombo yemvelo ageleza ngaphansi komhosha wethu. I-Nogal Peak inikeza izindlela zokugoqa zokuhamba izintaba.
- Ikhaya liyashisisa iPellet Stove
4.63 · 27 okushiwo abanye
Sihlala sitholakala kunoma imiphi imibuzo ongase ube nayo! Sicela usithumelele umlayezo usebenzisa uhlelo lokusebenza.